आविष्कारको खुलासा र गोपनीयताको सिद्धान्त : पेटेन्टका खुलासा कसरी गरिन्छ ? | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण आविष्कारको खुलासा र गोपनीयताको सिद्धान्त : पेटेन्टका खुलासा कसरी गरिन्छ ?
आविष्कारको खुलासा र गोपनीयताको सिद्धान्त : पेटेन्टका खुलासा कसरी गरिन्छ ?
आविष्कारको पेटेन्ट स्वीकृतिको लागि एउटा अपरिहार्य शर्त प्रस्तावित आविष्कारले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा पूर्ण रूपले खुलासा गर्नु हो । सरकारले निश्चित अवधिका लागि (न्यूनतम २० वर्ष) संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने र निश्चित क्रियाकलापमा एकलौटी अधिकार दिनुपर्ने औचित्य पनि त्यही पेटेन्ट प्रविधिको पूर्ण खुलासाको अपेक्षा नै हो । यसबाट प्रचुर मात्रामा सार्वजनिक हित अभिवृद्धि हुन्छ । जसै प्राविधिक ज्ञानको एउटा ढोका खुल्छ, त्यसैको धरातलमा टेकेर थप सयौं आविष्कारका तथा ज्ञानका सम्भावनाहरू उजागर हुन पुग्छन् ।
कसैको पेटेन्ट अधिकार एकाधिकार (मनोपोली) हैन एकलौटी अधिकार (एसक्लुसिभ) अधिकार हो । शैक्षिक, अनुसन्धानात्मक, प्रयोगात्मक र परीक्षणात्मक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न कसैको पेटेन्ट अधिकारले कुनै बाधा व्यवधान खडा गर्न पाउँदैन । एकलौटी अधिकार त कुनै वस्तुको आविष्कारमा भए सो वस्तुको सम्बन्धमा अथवा विधिको भए सो विधिको प्रयोग गरेर वस्तु उत्पादन गर्ने, आयात गर्ने, वितरण गर्ने, बेचबिखन गर्ने तथा सार्वजनिक उपभोग वा खपत गर्ने बाहेक अरू क्रियाकलापमा आकर्षित हुँदैन ।
पूर्ण खुलासाको परीक्षण गर्दा सम्बद्ध प्रविधिमा सामान्य शीप भएको प्राविधिज्ञले पेटेन्टका लागि प्रस्तावित डकुमेन्ट अध्ययन गरेर राम्रोसँग बुझ्न र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने भएमा पूर्णरूपले खुलासा गरेको मानिन्छ । यो कुरा ट्रिप्स सम्झौताको दफा २९ मा स्पष्ट पारिएको छ । आविष्कारको विवरण स्थानीय विज्ञले राम्रोसँग बुझ्न सक्ने र आविष्कारलाई व्यवहारमा उतार्न सक्ने गरी सबैभन्दा राम्रो उपाय सुझाइएको हुनु पर्छ । आविष्कारको पेटेन्ट लिने तर व्यावहारिक जानकारी लुकाउने गर्न पाइँदैन र विवरण खुलासा नभएका कुराहरूका लागि पेटेन्ट अधिकार दाबी गर्न पनि पाइँदैन । यो कुरा पेटेन्ट स्वीकृत भएपछि कसैको उजुरबाजुरबाट पछि जानकारी हुन आएमा पेटेन्ट खारेज पनि हुनसक्छ ।
खुलासाको अर्को पाटो दाखिला हुन आएको आवेदन पेटेन्ट अफिसले सार्वजनिक गर्ने विषय पनि हो । जुनसुकै आविष्कारको खुलासा गर्दा चार तरीकाले गरिन्छ – प्रकाशन, मौखिक, विद्युतीय प्रसारण र कृयायात्मक तरीकाबाट । प्रकाशनबाट आविष्कारको खुलासा गर्दा लिखत, पत्रपत्रिका र पुस्तिकाका रूपमा र मौखिक तरीका भनेको कुराकानीबाट प्रस्ट्याउने हो । विद्युतीय प्रसारण भनेको रेडियो, एफएम, टीभी, केबल आदि विद्युतीय सामग्रीको साहयताबाट गरिने प्रसारण हो । क्रियात्मक भनेको प्रयोग गरेर नतीजा देखाउनु हो । आवेदकले पहिलो, दोस्रो र चौथो तरिका र पेटेन्ट अफिसहरूले आवश्यकतानुसार जुनसुकै विधिबाट खुलासा गर्न सक्छन् ।
अर्काे कुरा सूक्ष्मजीव र जीव वैज्ञानिक सामग्री सम्बन्धमा ट्रिप्स सम्झौताले पेटेन्ट दिनु पर्ने कुरा त गरेको छ । तर, तिनको परीक्षण र संरक्षणको दायरा कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुरा कुनै पनि उल्लेख गरेको छैन । वस्तु नै दाखिला नभई यो कुरा यकिन हुन सक्दैन । त्यसैले यूरोपियन युनियनको कानूनमा आवेदन प्रकाशित गर्नुअघि त्यस्ता सामग्रीको नमूना दाखिला गरिसक्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
कुनै आविष्कारलाई खुलासा गर्नु भनेको त्यसबाट उत्पादन हुने कुनै वस्तु वा उत्पादन प्रविधि सम्बन्धमा सम्बद्ध विषयको साधारण ज्ञान भएको कुनै व्यक्तिलाई स्पष्ट पारिदिनु हो । सामान्यतया आविष्कार असान्दर्भिक समयमा असान्दर्भिक व्यक्तिको अगाडि खुलासा गर्नु हुँदैन किनभने यसो गर्नाले आविष्कारको पेटेन्टशीलताका लागि हुनुपर्ने नवीनताको लक्षण समाप्त हुन्छ । पेटेन्टशीलताका तीन शर्तबारे पहिलेका अंकमा चर्चा गरिसकिएको छ । नवीनता तीमध्ये एक हो । यो नभएको आविष्कारलाई पूर्व जानकारीमा रहेको (पूर्व कला) भनिन्छ र त्यस्ता आविष्कारको पेटेन्ट स्वीकृत हुँदैन ।
अतः आविष्कारकले आफ्नो आविष्कारको आवेदन पेटेन्ट अफिस (उद्योग विभाग) मा दाखिला गर्नुपूर्व पूर्ण रूपले गोप्य राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, हाम्रो मुलुकमा भने सृजनशील कार्यमा लागेका स्रष्टाहरूले आफ्नो आविष्कार पत्र पत्रिकामा सार्वजनिक गर्न हतारिन्छन् । यसरी सार्वजनिक गर्दा आविष्कारको नवीनता समाप्त हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा आविष्कार पेटेन्टका लागि ग्राह्य हुँदैन । गोपनीयताको पालना पेरिस महासन्धिको कुनै एक मुलुकमा प्रथम आवेदन दाखिला हँदासम्म गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि अन्य मुलुकमा आवेदन गर्न एक वर्षको ग्राह्यता मितिको सुविधा पाइन्छ । प्रथम आवेदन गरेको प्रमाण देखाए पछि सो मितिले १ वर्षभित्र आवेदन भएका सबैठाउँमा शुरूको मिति नै आवेदनको प्रमाणित मिति मानिन्छ र नवीनताको प्रश्न उठ्दैन ।
ग्राह्यता मिति भनेको उक्त महासन्धिका सदस्य राष्ट्रहरूले प्रथम आवेदनदेखि १ वर्षका लागि विश्वका विभिन्न सदस्य राष्ट्रमा आवेदनका लागि आवेदकलाई सहुलियत दिन सबै सदस्य सहमत भएको अवधि हो । यसरी आविष्कारको पेटेन्टका लागि आवेदन गर्दा आवेदन गर्नुपूर्व गोपनीयता र आवेदनपछि खुलासाका अनुशासनको पालना गर्नुपर्छ । दुवैको उत्तिकै बढी महŒव छ । तर, प्रयोजन र समय भने फरक छ । कुनै पेटेन्ट अफिसले कम्तिमा २० वर्षसम्म पेटेन्टलाई संरक्षण प्रदान गर्न किन तयार हुन्छन् ? किनकि त्यसको खुलासा गरिने ज्ञानबाट तुलनात्मक रूपले अझ धेरै सार्वजनिक लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ । फेरि, अविष्कार गर्ने, नयाँ अनुसन्धान गर्ने र सृजनशील काम गर्ने स्रष्टा हरेक पेटेन्ट अफिस समक्ष आविष्कारले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा पूर्ण रूपले उजागर गर्न किन तयार हुन्छन् ? किनकि अन्तरराष्ट्रिय जगत्का सबै सदस्य राष्ट्रमा २० वर्षसम्म कसैले दुरुपयोग गरे पूर्ण संरक्षण पाउन सकिन्छ ।
पेटेन्ट लगायत बौद्धिक सम्पत्तिको अन्तरराष्ट्रिय संरक्षणको आवश्यकता र महत्त्व सर्वप्रथम सन् १८७३ मा यूरोपेली मुलुकलाई बोध भयो । त्यस वर्ष अस्ट्रिया र हंगेरीले संयुक्त रूपमा भियनामा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको नवीन प्रविधिको प्रदर्शनी कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए । सो कार्यक्रममा कुनै पनि मुलुकका वैज्ञानिक तथा प्राविधिज्ञले भाग लिए तापनि आफ्नो नवीन प्रविधि प्रदर्शन गरेनन् । त्यसको प्रमुख कारण थियो आविष्कारको अन्तरराष्ट्रिय संरक्षण प्रत्यामूति अभाव । अतः ती आयोजक मुलुकहरूको दश वर्षको अभ्यास र समझदारी तथा फ्रान्सको सक्रियताबाट पेरिसमा सन् १८८३ मा एघार मुलुकका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको महासन्धि पेरिस महासन्धि १८८३ नामले सुपरिचित छ र हाल यसको सदस्यता १७७ पुगेको छ । सबै मुलुकहरूको बौद्धिक सम्पत्तिको प्रमुख कानूनी स्रोत र आधार यही महासन्धि हो । आविष्कारको गोपनीयता र खुलासाको अनुशासन पनि यही महासन्धिद्वारा निर्देशित छ । यस महासन्धिलाई विस्तृत रूपमा पछिल्ला अंकमा चर्चा गरिनेछ ।
जैवी साधनको पेटेन्ट